Sunday 18th July 2021 07:17:38 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Rag ka mid ah saaxiibada aan isku degaan-doorashada nahay ee reer Somaliland,
oo weliba qaarkood 20 sano ka badan kursi beeleed oo dad badan ka dhexeeya ku fadhiyey, ayaa diidan in si daah-furan loola tartamo. Kursaastaas ay sanooyinka badan ku fadhiyeen oo ay wasiirro qaran ku noqdeen, caqli-galna maaha in fursadda dhexda la soo dhigo.
Marka aad eegto doodda ay wadaan waa mid aan maangal ahayn, waxay doonayaan in aan lala tartamin oo kuraastooda loo xidho ama ay iyagu malxiisyo siyaasadeed oo ay wataan la tartamaan. Cabsida weyn ee ay doorashada ka qabaan waa in ay la tartamaan dad awood u leh inay kursiga ka qaadaan. Kuraaasta beelo ayaa leh, beelahana waa la wada yahay ee ma jirto cid si gaar ah mudnaan u sheegan karta. Waxa kale oo ay qiil ka dhiganayaan inay waqti adag soo shaqeeyeen oo ay midnimada u taagnaayeen, taasina waa wax jaban oo ma jirto wax ay ku kordhin karaan ama ka dhimi karaan midnimada maxaa yeelay ashkhaas ayey ka yihiin. Sidoo kale, kuraasta ay ku fadhiyaan waa kuwa ay dhaqaale iyo nolol ahaaan ba uga macaasheen, mana jirto cid ay uga faa'iideeyeen ama ay wax u tareen.
Saaxiibaday waxay haysa fool doorasho oo xanuun badan, waxana nudubta haysa ugu sii darsamay godobta iyo eedda ay cid walba oo ay doorashadu la xiriirto ay ka galeen. Tusaale ahaan waxay cadaw ka dhigteen oo ay eedeeyeen Madaxweynaha, Ra'iisul Wasaaraha, guddiga Doorashooyinka iyo xitaa Dawlad Goboleedyada qaar. Waxay qaateen siyaasad xagjirnimo ah oo aan heshiis iyo is-faham toonna oggolayn, taasina waxay ku dhaxalsiinaysaa guuldarro siyaasadeed.
Hadda waxay iska gadayaan Somaliland oo aysan wax wanaag ah u samayn intii ay halkan joogeen, waana tii ay lahaayeen siyaasadeed marfish ayaa laga hagaa. Kollay waa rag rajo-beel ah ee hadday cafis ka soo dalbadaan nidaamka Muuse Biixi, ha cafiyaan odayaashaas, illayn awalba midnimo meesha uma joogin oo qaarkood maba aaminsanayn.
Doorashadu uu hoggaaminayo Ra'iisul Maxamed Xuseen waa dhaqaaqday, mana jirto cid hor istaagi karta. Heshiis siyaasadeed ayaa la gaaray, hab-raac doorasho ayaa la sameeyey, guddiyo doorasho oo heshiis lagu yahay ayaa maanta jira. Ma jirto qiil haray oo doorasho daah-furan oo adduunku goobjoog ka yahay lagu diidi karo.
Hadday talo qaadanayaan, waxaan oran lahaa waar jahawareerka intaad iska deysaan, kaalaya si xalaal ah u tartama, oo oggolaada in walaalihiin idin la tartaamaan. Sidoo kale eedda iyo cadaw-samayshada iska daaya, waxba idiin tarimayso.
W/Q Murrashax Xildhibaan Aamina Qar Bila